မြန်မာဒီမိုကရေစီကွန်ဂရက် Myanmar Democracy Congress: August 2010
သဘာဝဓါတ်ငွေ့ ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ပတ်သက်သော ကျွန်ုပ်တို့အယူအဆ
Gas Article2-
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 2:01 PM2comments Links to this post
အောက်ဖေါ်ပြပါသတင်းမှာ ဘန်ကောက်ပို.စ်မှ ကူးယူ ဖေါ်ပြချက်ဖြစ်ပါသည်။ ဤသတင်း အရဆိုပါ လျှင် မြန်မာပြည်သည် ကမ္ဘာ ပေါ်တွင် အကြီးဆုံး Gas Exporter ဖြစ်လာဖွယ်ရှိပါ၏။ ထို အခါမြန်မာပြည် အစိုးရသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အချမ်းသာဆုံး အစိုး ရဖြစ်လာမည်ဖြစ်ပါသည်။ တိုင်း ပြည်နှင့်ပြည်သူများ ၏ကံ ကြမ္မာကတော့မ သေချာသေးပါ။
ချမ်းသာသောအာဏာရှင်သည် ဆင်းရဲသောအာဏာရှင်ထက် ပိုသက်ဆိုးရှည်တတ်၏။ တော်လှန် ရေးလုပ် သူများ ဘက်တွင်တော့ နောက်အနှစ် ၂၀ တော်လှန်ရေးဆက်လုပ်ဖို့မှာခက်ခဲသောကိစ္စဖြစ်၏။(မလုပ်နိုင်ဖို့များပါ သည်)။ အာဏာရှင်ဘက်တွင်တော့ ဓါတ်ငွေ့စာချုပ်အားလုံးက အနှစ် ၃၀ စာဖြစ်၏။
တော်လှန်ရေးမလုပ်နိုင်တော့လျှင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုသာ လုပ်ရ၏။ သိသာသောနိုင်ငံရေး သီအိုရီတစ် ရပ်ဖြစ်ပါသည်။ ရဲရဲတောက်များ၏ ၀ါဒဖြန့်မှုကိုပညာရှင်များနှင့်တိုင်ပင်ပြီးမှ ချင့်ချိန်ကြပါရန် အသိပေးအပ်ပါသည်။
• Published: 29/07/2010 at 01:16 PM
• Online news:
PTT Exploration and Production Plc (PTTEP) will on Friday sign an agreement to purchase natural gas from M9 or Zawtika Field with Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE), the national oil firm of Bur- ma , Energy Minister Wannarat Channukul said on Thursday.
Mr Wannarat said he will visit Burma tomorrow to witness the signing of the deal.“This isagood news for Thailand as PTTEP has ssuceeded in finding an overseas energy source to ensure energy security for the country,” the minister said.
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 2:11 PM3comments Links to this post
Ba Ka Pa 18-8-2010 -
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 10:43 AM 1 comments Links to this post
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 3:41 PM0comments Links to this post
ပါတီမူဝါဒရေးရာဌာနနှင့် ဘီဘီစီ လွတ်လပ်အတွေး ကဏ္ဍ ဖြစ်ပါ သည်။ လက်ရှိအခြေအနေ နှင့် မူဝါဒ အမှန်ကိုတင်ပြထားပါသည်။
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 11:06 AM0comments Links to this post
MDC ပါတီဥက္ကဌ ဦးကောင်းမြင့်ထွဋ် နှင့် ဗီအိုအေ တိုက်ရိုက်လေလှိုင်း အင်တာဗျူး ၁၈-၈-၂၀၁၀
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 9:17 AM0comments Links to this post
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 6:35 AM0comments Links to this post
မြန်မာပြည်ပညာရေးစနစ်က လွတ်လပ်ရေးမရမှီ ကိုလိုနီ ခေတ် တွင်ပြဌာန်းခဲ့သော ပညာရေးစနစ်အတိုင်းသာဆက် လက် တည် ရှိနေပါသည်။
ကိုလိုနီခေတ်တွင်စတင်သော ပညာရေးစနစ်မှာ ပြဌာန်းစာ အုပ်သတ်မှတ်၍ ထိုပြဌာန်းစာအုပ်အားသင်ရိုးကုန်အောင် သင်ပြီး ရ လာဒ် ကိုစာမေးပွဲအောင်ခြင်းရှုံးခြင်းဖြင့်ဆုံးဖြတ်သောစနစ်ဖြစ်သည်။ ထိုစနစ် ကိုမြန်မာပြည်တွင် ယနေ့တိုင် ကျင့်သုံးဆဲဖြစ်၏။ (ယခု ခေတ် တွင်သင်ရိုး ကုန်အောင် ပင်မသင်တော့။)
မ-ဆ-လ ခေတ် ၊ န-၀-တ ခေတ် တောက်လျှောက်သင်ရိုး ညွှန်းတမ်းပြောင်းလဲခဲ့သည်မှ အပစနစ်ပြောင်းသည်ဟူ၍ မရှိခဲ့ပါ။ ဤ စနစ်မှာ အခြေခံပညာရေးမှ တက္ကသိုလ်ပညာရေးအထိဖြစ်သည်။ ထို အရာကိုကျွန်ုပ်တို့မှပြုပြင်ပြောင်းလဲမည်။ လွယ်ကူသောကိစ္စမဟုတ်ပါ။ သို့သော် မလုပ်လို့လည်းမဖြစ်ပါ။
၁။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အား အရှေ့တောင်အာရှအဆင့်သို့မြှင့်တင်ရေး။
၂။ အခြေခံပညာအဆင့်အတွက် ဆရာအတတ်သင်သိပ္ပံ နှင့် ပညာရေးတ က္ကသိုလ် များကို အဆင့်မြှင့်ရေး။
၃။ အခြေခံပညာရေး သင်ကြားမှုစနစ်များပြောင်းလဲရေး။
၄။ အခြေခံပညာကျောင်းများရှိ မိဘဆရာအသင်း ရံပုံငွေ ကောက်ခံ ခြင်း နှင့် သုံးစွဲခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေများ ပြဌန်းသတ်မှတ်ခြင်း။
၅။ မူလတန်းအဆင့်ပညာရေးကို လူတိုင်း မသင်မဖြစ်သင်ယူနိုင်ရေး။
ကျွန်ုပ်တို့ ၈၈ မျိုးဆက်များက စစ်အစိုးရလက်ထက်တွင် မူလ တန်းမှ တက္ကသိုလ်ထိကျောင်းတက်ခဲ့သူများ ဖြစ်၍ မြန်မာပြည်ပညာ ရေးစနစ်အကြောင်း ကောင်းကောင်းသိသူများဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တိုင်းပြည်၏ အခြေခံပညာရေးအား နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီရန်အတွက် ဆယ်စုနှစ် ၂ စု ၃ စုခန့် အချိန်ယူရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ထိုင်း နိုင်ငံတွင် ၂ နှစ်၊ နော်ဝေနိုင်ငံတွင် ၄ နှစ် နေခဲ့၏။ ယခု ယူကေ တွင်နေသည်။ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတို့၏ ပညာရေးစနစ်ကို လေ့လာခွင့်ရခဲ့၏။ ကျောင်းများကိုလေ့လာခွင့်ရ၏။ ပြဌာန်း စာအုပ်များလေ့လာခွင့်ရခဲ့၏။ ပညာရေးစနစ်က အလွန်ကွာခြားနေပြီ ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့အုပ်စု နော်ဝေအထက်တန်းကျောင်းသို့ လေ့ လာရေးသွားခဲ့၏။ ဂီတအထူးပြုကျောင်းသားများက တီး ၀ိုင်းအပြည့်ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အား ကြိုဆိုသည်။ တူရိယာပစ္စည်း အားလုံးတို့က ပထမတန်းစားဖြစ်သည်။ ဆေးဝါးပညာ အထူးပြုအခန်းကိုရောက်တော့ သွေးပေါင် ချိန်ခြင်း၊ သွေးအုပ်စုခွဲခြင်းတို့အား ဆောင်ရွက်ပေး၏။ သူတို့၏နားကြပ် များဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့သို့နားထောင်ကြ၏။ အဆောက်အဦး အင်ဂျင်နီယာ ကျောင်းသားများ အခန်းကိုရောက်တော့ ဟောခန်းအ တွင်းရှိတစ်နေရာတွင် တိုက်အိမ်အသေးစားတစ်လုံးကို ကိုယ်တိုင် ဆောက်နေကြ၏။ နောက်နေ့တွင်ပြန်ဖျက်ပြီး နောက်ထပ်ဆောက်ကြအုံးမည်ဖြစ်သည်။ စက်မှုကျောင်းသားများအခန်းကိုရောက်တော့ ကျွန် တော်ဘာမှန်းမသိသောစက်ပစ္စည်းများဖြင့် အလုပ်ရှုပ်နေကြ၏။ မီဒီယာ လေ့လာနေသော ကျောင်းသားများက သူတို့ရိုက်ကူးထားသော
ကြော်ငြာစီဒီ ကိုဖွင့်ပြ၏။ ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေးအတွက် သုံးသော ပစ္စည်းများက လုပ်ငန်းခွင်သုံးပစ္စည်း အစစ်များဖြစ်သည်။ ဤ သည်က တစ်နိုင်ငံလုံး ရှိအစိုးရ ကျောင်းများ (StateSchools) အားလုံးဖြစ်သည်။ သီးသန့်ကြေးကြီးပေးရသောပုဂ္ဂလိကကျောင်းများ (Private Schools) မဟုတ်ကြပါ။
အင်္ဂလန်ရှိမူလတန်း ကလေးအတွက် ဆရာမကပေးလိုက် သောအိမ်စာမှာ သူမှာလိုက်သော ခေါင်းစဉ် တစ်ခုအကြောင်းကို အင်တာနက်တွင် ရှာလာပြီး စာတမ်းရေးလာဖို့ဖြစ်သည်။ သူရှာဖွေ ပြုစုရေးသားလာခဲ့သော အချက်အလက်ပေါ် မူတည်၍ (ကောင်း၊သင့်၊ညံ့) ဆရာမက သတ်မှတ်ပေးသည်။
အထက်တန်းကျောင်းသားများအတွက် ပထမဘာသာစကား အင်္ဂလိပ်စာအပြင်၊အခြားဥ ရောပဘာသာစကားတစ်ခုခုကို မသင်မနေရ သတ်မှတ်ထားသည်။ (ဥပမာ-မူလတန်းအရွယ်မှစ၍ အင်္ဂလိပ်ဘာသာရပ်အပြင် စပိန် သို့မဟုတ် ပြင်သစ် သို့မဟုတ် ဂျာမန်ဘာသာရပ် တခုခုကို မဖြစ်မနေ သင်ယူရ၏။) စာသင်နှစ် အတွင်း စံနစ်တကျ အားကစားလေ့ကျင့်ပေးခြင်း၊ ဂီတပညာသင်ပေးခြင်း၊ ခရီးရှည် ၊ ခရီးတို၊ ခရီးကြမ်း လေ့လာရေးမျိုးစုံ ကျောင်းသားကျောင်းသူများအုပ်စုလိုက် အတူတကွထွက်စေခြင်းဖြင့် အထွေထွေဗဟုသုတ ရစေခြင်း၊ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းပညာရစေခြင်း၊ ဇွဲ လုံ့လ ဝီရိယရှိစေခြင်းတို့က တနှစ်စာ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင်မပါမပြီး ဖြစ်သည်။ ကွန်ပြူ တာသင်တန်းက မြန်မာပြည်မှာလို အီးမေး၊ အင်တာနက်သင်တန်းများ အထူးတလည် မလိုအပ်ပဲ၊ အိမ်မှာရှိသော ကွန်ပြူတာကို နေ့စဉ် သုံးစွဲလေ့ကျင့်ရင်း ကလေးတိုင်း လုပ်တတ်သည်။ Power Point, Excel တို့ကိုကျောင်းမှာသင်၏။ အထက် တန်းကျောင်းသားတိုင်း Lap Top တစ်လုံးစီရှိသည်။ အိမ်မှဝယ်မပေး နိုင်လျှင်ကျောင်းမှ လပေးဖြင့်ငှား၏။ ကွန်ပြူတာပျက်စီးလျှင် အာမခံ ကုမ္ပဏီမှလျှော်သည်။ ကျောင်းသင်ခန်းစာများ အင်တာနက်တွင် လုပ် နိုင်၏။ အားကစားက မလုပ်မနေရဖြစ်သည်။ လေ့ကျင့်ထားသော အား ကစားနည်းပြက စနစ်တကျသင်ကြား၏။ အားကစားဝတ်စုံ အပြည့်
ကလေးတိုင်းဝတ်ရ၏။ ကစားကွင်းများ အလုံအလောက်ရှိသည်။
ဆရာများက ဆရာဖြစ်သင်တန်း မျိုးစုံတက်ပြီးဖြစ်ရသည်။ ကျောင်း နှင့် မိဘ အမြဲတန်းအဆက်အသွယ်ရှိ၏။ ဤမျှလောက် ကွာ ခြားနေသော ပညာရေးအဆင့်အတန်းကို ယခုမှ စမလုပ်လျှင် ဘယ်တော့လုပ်မည်နည်း။
ဤအဆင့်ကိုရောက်ရန် ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ပညာရေးတစ်ခု ထဲကိုပင်လျှင် အတင်းမြှင့်တင်နိုင်ပါမှ နောက်ဆယ်စုနှစ် ၂ စု ၃ စုခန့် အနည်း ဆုံးစောင့်ရဦးမည်ဆိုလျှင် လွန်မည်မထင်ပါ။
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 4:08 PM 1 comments Links to this post
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 6:46 AM0comments Links to this post